မြင်မြင်ချင်း ချစ်မိတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ရဲ့ လား? – Trend.com.mm
မြင်မြင်ချင်း ချစ်မိတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ရဲ့ လား?
Posted on April 10, 2018 October 12, 2018 by Noel
မြင်မြင်ချင်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို ကြားဖူးကြမှာပါ။ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ချို့ကျတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဝေဖန်ကြသလို တစ်ချို့ကလည်းမြင်မြင်ချင်းချစ်မိသွားတယ်ဆိုရင် ဒါက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းလို့ပဲလို့ပြောကြပါတယ်။မြင်မြင်ချင်းအချစ်ကို နားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့မလွယ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ မြင်မြင်ချင်းအချစ်ကိုကြုံခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတော့ သူမရဲ့ ချစ်သူကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်မိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊
စတွေ့တဲ့အချိန်ခဏလေးမှာ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရဖူးတဲ့စိတ်ကျေနပ်ပျော်ရွှင်မှုမျိုး၊ စိတ်လှုပ်ရှားနူးညံ့မှုမျိုး၊ထူးဆန်းပြီး နှလုံးသားကပါနွေးထွေးမှုကိုခံစားခဲ့ရကြောင်း သူမရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြခဲ့ဖူးတယ်လို့သိရပါတယ်။
တစ်ခါမှမမြင်ဖူးတဲ့သူတစ်ယောက်ကို မြင်မြင်ချင်းချစ်သွားပြီး ဘ၀တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့အဖြေကို သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ချို့ကတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ ထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ထောက်ခံတဲ့သူတွေရှိသလို မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆို ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်။အချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အားလုံးလိုလိုက တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနေကြတာပဲမဟုတ်လား။
မြင်မြင်ချင်းအချစ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်လို့လားလို့စဉ်းစားနေကြပေမဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်း ဘယ်သူကမှ စေ့စေ့စပ်စပ်လိုက်ပြီး မြင်မြင်ချင်းအချစ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်း လိုက်ရှင်းပြနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်သူမဆို “ငါကသူ့ကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်ခဲ့တာ”ဆိုတဲ့ စကားကိုကြားရင် အော် သူတို့ရဲ့တွေ့ဆုံပုံလေးကချိုမြိန်လိုက်တာလို့ပဲ တွေးမိမှာပါ။
တကယ်လို့များသင်က တစ်ယောက်ယောက်ကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်မိသွားတာမျိုးများကြုံရမလားလို့ တွေးမိနေရင် မြင်မြင်ချင်းချစ်မိသူတွေရဲ့ပထမဆုံးရင်ခုန်သံအတွေ့အကြုံ လေးတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။ တကယ်လို့ တစ်ယောက်ယောက်ကို စတွေ့တာနဲ့ ဒီအချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီနေရင် အဲ့ဒါ သင်သူ့ကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်မိသွားလို့ပါပဲတဲ့။
၁)တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်လို့ သင့်ရဲ့ အစာအိမ်ထဲမှာလိပ်ပြာတွေခတ်နေသလို လှပ်လှပ် လှပ်လှပ်ဖြစ်လာတာမျိုး။
၂)စတွေ့ချိန်မှာတောင် သူ့ရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို လိုချင်နေတာမျိုး။
၃)သူက သင်နဲ့လုံးဝမလိုက်ဖက်ဘူး၊မသင့်တော်ဘူးလို့သိနေတာတောင် သူ့ဆီမှာ နစ်မျောသွားတာမျိုး။
၄)သူနဲ့စတွေ့ပြီးကတည်းက စဉ်းစားတာမရပ်တော့တာမျိုး။ခရီးသွားဟန်လွှဲတွေ့တာမျိုးဆို နောက်တစ်ကြိမ်ဆုံစည်းဖို့ စောင့်ပေတော့ပဲ။
၅)သူနဲ့စကားပြောနေရင် စွန့်စားခန်းထွက်နေရသလို ရင်တွေခုန်လာတာမျိုး။
၆)ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့တာဆိုပေမဲ့ ဒီတစ်ယောက်က ကိုယ့်ရဲ့ King ၊Queen ပဲလို့ စိတ်ထဲက ကွက်တိသေချာနေတာမျိုး။
ဒီလို ဒီလိုအချက်လေးတွေက မြင်မြင်ချင်းအချစ်ဆိုတာရဲ့ ခံစားချက်လေးတွေ ပါတဲ့။မြင်မြင်ချင်းအချစ်ဆိုတာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုရှိလို့ ချစ်မိတယ်ဆိုတာထက် စိတ်ခံစားချက်ကြောင့် ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သင့်ဘ၀မှာရော တစ်စုံတစ်ယောက်ကို မြင်မြင်ချင်း ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးဖြစ်ဖူးရဲ့လား? အတွေ့အကြုံတွေဝေမျှခဲ့ဦးနော်။
မွငျမွငျခငျြးခဈြတယျဆိုတဲ့စကားကို ကွားဖူးကွမှာပါ။ဒီစကားနဲ့ပတျသကျပွီး တဈခြို့ကတြော့ မဖွဈနိုငျဘူးလို့ဝဖေနျကွသလို တဈခြို့ကလညျးမွငျမွငျခငျြးခဈြမိသှားတယျဆိုရငျ ဒါက ရုပျပိုငျးဆိုငျရာအရ ဆှဲဆောငျမှုရှိလှနျးလို့ပဲလို့ပွောကွပါတယျ။မွငျမွငျခငျြးအခဈြကို နားလညျအောငျရှငျးပွဖို့မလှယျပါဘူး။ဒါပမေဲ့ မွငျမွငျခငျြးအခဈြကိုကွုံခဲ့ရတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျကတော့ သူမရဲ့ ခဈြသူကိုမွငျမွငျခငျြးခဈြမိခဲ့တာဖွဈတဲ့အကွောငျး၊
စတှတေဲ့အခြိနျခဏလေးမှာ ဘဝတဈလြှောကျလုံးမှာတဈခါမှမကွုံခဲ့ရဖူးတဲ့စိတျကနြေပျပြျောရှငျမှုမြိုး၊ စိတျလှုပျရှားမှုမြိုး၊ထူးဆနျးပွီး နှလုံးသားကပါနှေးထှေးမှုကိုခံစားခဲ့ရကွောငျး သူမရဲ့အတှအေ့ကွုံကိုပွောပွခဲ့ဖူးတယျလို့သိရပါတယျ။
တဈခါမှမမွငျဖူးတဲ့သူတဈယောကျကို မွငျမွငျခငျြးခဈြသှားပွီး ဘဝတဈခုတညျထောငျဖို့ ဆိုတာဖွဈနိုငျပါ့မလားဆိုတဲ့အဖွကေို သိပ်ပံပညာရှငျတဈခြို့ကတော့ဖွဈနိုငျပါတယျလို့ ထောကျခံခဲ့ကွပါတယျ။ထောကျခံတဲ့သူတှရှေိသလို မဖွဈနိုငျဘူးလို့ဝဖေနျပွောဆို ကွတဲ့သူတှလေညျးရှိကွပါတယျ။အခဈြနဲ့ပတျသကျရငျအားလုံးလိုလိုက တဈယောကျတဈမြိုးစီအဓိပ်ပာယျဖှငျ့ဆိုနကွေတာပဲမဟုတျလား။
မွငျမွငျခငျြးအခဈြဆိုတာ ဖွဈနိုငျလို့လားလို့စဉျးစားနကွေပမေဲ့ မဖွဈနိုငျဘူးဆိုရငျလညျး ဘယျသူကမှ စစေ့စေ့ပျစပျလိုကျပွီး မွငျမွငျခငျြးအခဈြဆိုတာမဖွဈနိုငျတဲ့အကွောငျး လိုကျရှငျးပွနမှောမဟုတျပါဘူး။ဘယျသူမဆို “ငါကသူ့ကိုမွငျမွငျခငျြးခဈြခဲ့တာ”ဆိုတဲ့ စကားကိုကွားရငျ အျော သူတို့ရဲ့တှဆေုံ့ပုံလေးကခြိုမွိနျလိုကျတာလို့ပဲ တှေးမိမှာပါ။
တကယျလို့မြားသငျက တဈယောကျယောကျကိုမွငျမွငျခငျြးခဈြမိသှားတာမြိုးမြားကွုံရမလားလို့ တှေးမိနရေငျ မွငျမွငျခငျြးခဈြမိသူတှရေဲ့ပထမဆုံးရငျခုနျသံအတှအေ့ကွုံ လေးတှကေိုပွောပွပေးသှားပါမယျ။ တကယျလို့ တဈယောကျယောကျကို စတှတေ့ာနဲ့ ဒီအခကျြတှနေဲ့ကိုကျညီနရေငျ အဲ့ဒါ သငျသူ့ကိုမွငျမွငျခငျြးခဈြမိသှားလို့ပါပဲတဲ့။
၁)တဈစုံတဈယောကျကိုမွငျလိုကျလို့ သငျ့ရဲ့ အစာအိမျထဲမှာလိပျပွာတှခေတျနသေလို လှပျလှပျ လှပျလှပျဖွဈလာတာမြိုး။
၂)စတှခြေိ့နျမှာတောငျ သူ့ရဲ့ အာရုံစိုကျမှုကို လိုခငျြနတောမြိုး။
၃)သူက သငျနဲ့လုံးဝမလိုကျဖကျဘူး၊မသငျ့တျောဘူးလို့သိနတောတောငျ သူ့ဆီမှာ နဈမြောသှားတာမြိုး။
၄)သူနဲ့စတှပွေီ့းကတညျးက စဉျးစားတာမရပျတော့တာမြိုး။ခရီးသှားဟနျလှဲတှတေ့ာမြိုးဆို နောကျတဈကွိမျဆုံစညျးဖို့ စောငျ့ပတေော့ပဲ။
၅)သူနဲ့စကားပွောနရေငျ စှနျ့စားခနျးထှကျနရေသလို ရငျတှခေုနျလာတာမြိုး။
၆)ပထမဆုံးအကွိမျတှတေ့ာဆိုပမေဲ့ ဒီတဈယောကျက ကိုယျ့ရဲ့ King ၊Queen ပဲလို့ စိတျထဲက ကှကျတိသခြောနတောမြိုး။
ဒီလို ဒီလိုအခကျြလေးတှကေ မွငျမွငျခငျြးအခဈြဆိုတာရဲ့ ခံစားခကျြလေးတှေ ပါတဲ့။မွငျမွငျခငျြးအခဈြဆိုတာ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာဆှဲဆောငျမှုရှိလို့ ခဈြမိတယျဆိုတာထကျ စိတျခံစားခကျြကွောငျ့ ပိုပွီးဖွဈနိုငျပါတယျ။သငျ့ဘဝမှာရော တဈစုံတဈယောကျကို မွငျမွငျခငျြး ခဈြတယျဆိုတဲ့ခံစားခကျြမြိုးဖွဈဖူးရဲ့လား? အတှအေ့ကွုံတှဝေမြှေခဲ့ဦးနျော။
ရုရှား ဓာတ်ပုံဆရာ Marat Safin ရဲ့ ထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့ စိတ္တဇဆန်ဆန် အမျိုးသမီးပုံရိပ်များ